नेतृत्वलाई कार्यकर्ताको प्रश्‍न – कहिले मिल्नुहुन्छ ? लाजले मुख छोपेर हिड्नुपर्ने भइसक्यो ! - Pura Samachar
नेतृत्वलाई कार्यकर्ताको प्रश्‍न – कहिले मिल्नुहुन्छ ? लाजले मुख छोपेर हिड्नुपर्ने भइसक्यो !
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीचको अन्तर कलह थप चुलिँदै गएको छ । असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक हठात प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भएपछि अन्योलमा छ । एक सय ५६ केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहितको पत्र केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउँदै केन्द्रीय कमिटी बोलाउन माग गरेका छन् । त्यसैगरी आइतबार ६३ जना सांसदहरुले लिखित पत्र पठाउँदै आफूहरु कुनै गुटभन्दा पनि पार्टी एकताको पक्षमा भएको बताएका छन् ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुले यसरी केन्द्रीय कमिटीलाई लिखित पत्र पठाए पनि त्यसको कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन । तर, पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले साउन २१ गते बुधबार गोप्य पत्रकार भेला बोलाएपछि स्थिति थप अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ ।
उक्त भेलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच संवाद हुन सकेको छैन । पार्टीलाई एकतामा लैजाने ‘मतियार’ दाबी गर्दै दुबै पक्षले सामाजिक सञ्‍जालमार्फत् घोचपेच गरिरहेकै छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ओलीलाई अपदस्थ गर्न पार्टी फुटाएर बन्‍ने नयाँ समिकरणको भागबण्डा गरेकोसमेत सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसैगरी ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रवक्ता श्रेष्ठलाई पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेकाे आरोप लगाउँदै प्रवक्ता पदको लाज जोगाउन आग्रह गरेका थिए ।
उता प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पनि आफू निकट गुटको भेला बोलाएर कुन रणनीति अनुसार अघि बढ्ने भन्‍ने योजना बनाइरहेको छ । ओलीले धोका दिएको भन्दै प्रचण्ड पक्षमा उभिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेकोले कुनै गुटमा नलाग्‍ने बताएका छन् । राजनीतिक उतारचढाव र अभिव्यक्ति हेर्दा उनले सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिने संकेत गरेका छन् । जसका कारण सचिवालयमा बहुमत पुग्‍ने देखेर प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण समस्याको छिनोफाने सचिवालयबाटै गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तर, प्रचण्ड पक्षले पनि स्थायी कमिटी बोलाउन दबाब दिइरहेकाे छ । प्रवक्ता श्रेष्ठलेसमेत शनिबार एक स्टाटस लेख्दै चाँडै स्थायी कमिटी बोलाउनु पर्ने बताएका छन् । ओली भने स्थायी कमिटीमा आफू अल्पमतमा पर्ने देखेर बैठक बोलाउन अनिच्छुक देखिएका छन् । जसका कारण उनले यसअघि बोलाइएको स्थायी कमिटी एकलौटी रुपमा स्थगित गरेका थिए ।
पार्टी नेतृत्वको यस्तो अन्तरकलहले जिल्ला र वडा तहसम्मका कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ । कोरोना महामारीजस्तो संकटमा पनि पार्टी विभाजन हुने त्रासले उनीहरुमा निराशा छाएको हो । देशभरका स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले कोरोनाविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्‍न नसकेको आरोप खेपिरहेका बेला केन्द्रमा फुटको राजनीति हुँदा कार्यकर्ता निराश हुनु स्वाभाविक हो । उनीहरुले राजनीतिक विकल्प खोजी गरिरहेका छन् ।
आइतबार प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीको आन्तरिक कलहलाई संकेत गर्दै सामाजिक सञ्‍जालमा स्टाटस पोस्ट गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “सत्यको प्रकाशमा र सत्यको वरिपरि समाज प्रगति र स्वतन्त्रताको यात्रमा अघि बढिरहेको हुन्छ । समाजको चुम्बकीय चालक शक्ति सत्य नै हो । तर, सत्य स्थपाना त्यति सजिलो हुँदैन र त्यसैले तत्कालै सर्वस्विकार्य हुन्छ भन्ने होइन । नत्र समाज सजिलै साम्यवादमा पुग्थ्यो वा रामराज्य बन्थ्यो । यसकालागि निरन्तरको धैर्यपुर्ण प्रयत्न आवश्यकता हुन्छ।अन्तत: सत्यकै जित हुन्छ,किनकि सत्य सत्य हो र जीवन र जगतको स्वभाविक अस्तित्व एवं अग्रगति यसैमा अन्तर्निहित हुन्छ ।”
उनले थपेका छन्, “शुकरातलाई सत्य बुझ भनेर प्रचार गरिएकै कारणले शाशकहरुले बिष पिलाएर हत्या गरे। गौतम बुध्दलाई आफ्नै सँघका शिष्य भिक्षुहरुले हत्या गर्ने दुश्प्रयत्न गरे। लेनिनलाई क्रान्तिको नेतृत्व गरेकै कारणले जर्मन एजेण्ट भनेर प्रचार गरियो र क्रान्तिपछि गोलि हानियो । महात्मा गान्धीको हत्या गरियो । माओलाई आफैले उत्तारधिकारी भनेर घोषणा गरेको लिनप्याओले हत्या गरेर पद हत्याउने षडयन्त्र गरे । हाम्रा महान शहीदहरुलाई लोकतन्त्र र परिवर्तनको सत्यको पक्ष लिएकै कारण शासकहरुले हत्या गरे । तर कसैको विरोध, आरोप, हत्याको षडयन्त्र वा हत्याले सत्य पराजित भएन । अन्तत: सत्य स्थापित भई छाड्यो । त्यसैले सत्यको पक्षधरता कहिल्यै खेर जाँदैन । सत्यको पक्षमा निर्भिक भएर लागिरहौं । कहिलेकहीँ हामी सबैलाई सत्ताको अहंकारजन्यले अन्धताले सत्यबाट बिचलित हुने खतरा पैदा गर्दछ, बचौं र बचाऔं ।”
यस पोस्टको प्रतिक्रियामा अधिकांश नेकपा कार्यकर्ताले पार्टी नेतृत्वका कारण आफूहरुमा निराशा छाएको बताएका छन् । जसमध्ये लायन प्रभु थापा नेपाली नाम गरेका एकजनाले लेखेका छन्, “तपाईं सचिवालयका माहामहिम नेताहरूले जति सक्दो चाँडो एकअर्कालाई खुइलाउने काम सम्पन्‍न गर्नूस । पार्टी तपाईंहरू ३/५ जना नेताहरूले मात्रै बनाउनु भएको हो ? त्यसैले लाखौ पार्टी सदस्यहरूको वास्ता नगरी मन लाग्दी नगर्नूस रामराज्य चाँडै नै आउने छ । तपाईहरूको झगडाले हामीले मुख छोपेर हिड्ने दिन आइरहेको छ ।”
अर्का एकजना बाबुराम पाण्डेले लेखेका छन्, “दुवै अध्यक्ष ले कम्युनिष्ट ‘इथिक्स’ छाडिसके । अब तपाईंले हिम्मतसाथ नेतृत्व लिने हो ।”